OIC မည်သည့်ပုံစံဖြင့်လာလာဆန့်ကျင်မည်ဟုစစ်တွေခေါင်းဆောင်များကဦးထွေးလှအားပြောကြား | MoeMaKa Burmese News & Media
သောင်းကြွယ်၊ စစ်တွေ၊၁၄အောက်တိုဘာ၂၀၁၂၊ Coral Arakan News ၊ [သတင်း]
ထို့အပြင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအပါအ၀င်ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ (၂၅)ဖွဲ့ကိုစုစည်းကာ Arakan Rohingya Union အဖြစ် OIC ကကမကထပြုကာ ၂၀၁၁–ခုနှစ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည့်အချက်ကိုလည်း ၄င်းကထောက်ပြခဲ့သည်။
Click the following link to go to the article.
4 Responses to OIC မည်သည့်ပုံစံဖြင့်လာလာဆန့်ကျင်မည်ဟုစစ်တွေခေါင်းဆောင်များကဦးထွေးလှအားပြောကြား
pnwara on October 14, 2012 at 6:46 pm
မြန်မာ အစိုးရက ဘာကြောင့် အိုအိုင်စီ ကို လက်ခံရသလဲ- ယခင်က အမေရိကန်တောင် ဆန့် ကျင်လာခဲ့တာ အခုအိုင်အိုစီ အဖွဲ့ ကျမှ လက်မြှောက်အရှုံးပေးလိုက်တာ ဘယ်လိုများ ထင်မြင်ယူဆ ကြပါသလဲ- တတ်သိပညာရှင်များဝေဖန်ဆွေးနွေးပေးပါ။
Khun Naw Oo(Bkk) on October 14, 2012 at 7:18 pm
I know one muslim woman(NGO staff) from yangon.She often go to islamic countries for meeting with other muslim(maybe leaders).she is in Chiang Mai now.Office in Yangon too.She got USD 900amonth.They doing work for rohinnja under the name of ….NGO.Some of them start from ……volunteer.Just shared something i knew, for the duty ofaMyanmar Pyi Thar.Nothing personal.
Khun Naw Oo(Bkk) on October 14, 2012 at 8:25 pm
I am not hate or dislike muslims.Just try to talk about NGO using local myanmar muslim.
joe on October 15, 2012 at 2:21 pm
ကျွန်တော်တို. မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အတွက် OIC လာဖွင့်ဖို.မလိုအပ်ပါဘူး ၊ အရင် ခေတ်အဆက်ဆက်မှာလဲ ၊ ဘယ်တုံးကမှ
ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံနဲ. ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံသားတွေကို ကူညီခဲ.တာမရှိပါဘူး ၊ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ ဘာသာရေး နယ်ချဲ.နည်းအသစ်ပါ ။ လုံးဝ လက်မခံသင့်ဘူးလို.နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ. အကြံပြု ချင်ပါတယ် ။
အောင်ငြိမ်းချမ်း၊ ဝင်းနန္ဒာ/Myanmar Now ● ဘုန်းကြီးကျောင်း ငရဲခန်းမှာ လပေါင်းများစွာ https://t.co/TugPveIht3 https://t.co/tBsewScZmI about 46 minutes ago ReplyRetweetFavorite